ပို့စ်တင်ချိန် - 9/15/2013 11:33:00 AM
CDMA 2000သည် 3G မိုဘိုင်းလ် နည်းပညာစံနှုန်း အုပ်စုထဲမှဖြစ်ပြီး တယ်လီဖုန်း ဝန်ဆောင်မှုနှင့် မိုဘိုင်းလ် အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုများ ကောင်းမွန်စွာ ပေးနိုင်ရန်အတွက် တစ်ကမ္ဘာလုံးမှ နာမည်ကျော် အော်ပရေတာများက တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် လက်ခံ သုံးစွဲလျက် ရှိသည်။
Verizon/KDDI/China Telecom ကဲ့သို့ ကမ္ဘာ့ဆက်သွယ်ရေးကို ဦးဆောင်နေသော အော်ပရေတာ များသည် ၎င်းတို့၏ ဖုန်းသုံးစွဲသူများအတွက် အကောင်းတကာ့ အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှုများကို သင့်တင့်မျှတသော ဈေးနှုန်းဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန် CDMA/EVDO ကွန်ရက်များကို တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ဖြန့်ကြက် တည်ဆောက် အသုံးပြုကြသည်။
CDG (CDMA Development Group) ၏ နောက်ဆုံး ကိန်းဂဏန်းများအရ လက်ရှိတွင် နိုင်ငံပေါင်း ၁၁၈ နိုင်ငံတွင် CDMA အော်ပရေတာပေါင်း ၃၁၅ ဦး တို့က ဝန်ဆောင်မှု ပေးလျက်ရှိသည်။ ကမ္ဘာနှင့်အဝှမ်း CDMA ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဆိုင်ရာ ဈေးကွက် အချက်အလက် အကျဉ်းချုပ်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။
- အော်ပရေတာစုစုပေါင်း ၃၁၅ ဦး
- နိုင်ငံစုစုပေါင်း ၁၁၈ နိုင်ငံ
- CDMA 2000 1X ကွန်ရက် စုစုပေါင်း ၃ဝ၁ ခု
- 1xEV-DO Rel. O ကွန်ရက် စုစုပေါင်း ၁၁၂ ခု
- 1xEV-DO Rev. A ကွန်ရက် စုစုပေါင်း ၁၇၄ ခု
- 12 commercial EV-DO Rev. B ကွန်ရက် စုစုပေါင်း ၁၂ ခု
- ပစ္စည်း အမျိုးအစားပေါင်း ၃၃၄ဝ ကို ဈေးကွက်သို့ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး (သြဂုတ် ၆ ရက်၊ ၂ဝ၁၃ အထိ) CDMA2000 နည်းပညာသည် ကမ္ဘာနှင့်အဝှမ်း 3G နည်းပညာ ဦးဆောင်သူ တစ်ဦးအဖြစ် ၎င်း၏ဈေးကွက် နေရာရရှိထားမှုကို ပိုမိုခိုင်မာစေရန်အတွက် ရှေ့ဆက် သွားလျက် ရှိသည်။ အော်ပရေတာများကို သူ၏ ဖုန်းသုံးစွဲသူများ ဖုန်းဝန်ဆောင်မှုနှင့် မိုဘိုင်းလ် အင်တာနက်သုံးစွဲရာတွင် ကျေနပ်မှု ရှိစေရန်အတွက် CDMA2000 နည်းပညာသည် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် CDMA နည်းပညာသည် အလွန်လျင်မြန်စွာဖြင့် ကောင်းမွန်စွာ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ခဲ့ရာ အထူးသဖြင့် MecTel CDMA ကွန်ရက်ကို စတင်ဝန်ဆောင်မှု ပေးပြီး နောက်ပိုင်းတွင် CDMA ဖုန်းသုံးစွဲသူ အရေအတွက်သည် နှစ်လအတွင်း တစ်သန်းအထိ တိုးတက် လာခဲ့သည်။ ဆင်းကတ်ဈေးနှုန်းသည် ယခင်ဈေး၏ ၁ ရာခိုင်နှုန်းမျှသာ ရှိပြီး လူအများ လက်လှမ်းမီ သည့် ဈေးနှုန်း ဖြစ် လာသည်။ အနည်းဆုံးဈေးနှုန်း၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော အရည်အသွေး၊ ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်သော စိမ်းလန်း နည်းပညာအစရှိသော CDMA ၏အကျိုး ကျေးဇူးများ သည် CDMA နည်းပညာကို လူအများပိုမို ရွေးချယ် သုံးစွဲ လာအောင် ဆွဲဆောင်လျက် ရှိသည်။
CDMA ဆင်းကတ်များသည် ယခုနှစ်တွင် လူကြိုက်အများဆုံးသော ကုန်ပစ္စည်း တစ်ခု ဖြစ်လာရာ MecTel သည် ၎င်း၏ ကွန်ရက်ဝန်ဆောင်မှု စွမ်းရည် ပြည့်လုနီး ပါး ဖြစ်နေ ပြီ ဖြစ်သောကြောင့် ရောင်းချခြင်း အစီအစဉ်ကို လျှော့ချရန် လိုအပ်သည်။ သို့သော် စိတ်ပူရန် မလိုတော့ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဝန်ဆောင်မှုများ ပိုပေးနိုင်ရန်အတွက် ပိုမိုကြီးမားသော တိုးချဲ့မှုများကို လုပ်ဆောင်နေပြီ ဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်ကုန်တွင် မြန်မာပြည်သူများသည် CDMA မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများကို ပိုမိုသုံးစွဲ လာကြတော့မည် ဖြစ်သည့်အပြင် ဆင်းကတ်များကိုလည်း အလွယ်တကူ လျှောက်ထား ဝယ်ယူနိုင်ကြတော့မည် ဖြစ်သည်။
China Telecom အပါအဝင် ကမ္ဘာ့ဆက်သွယ်ရေး ဦးဆောင် အော်ပရေတာများသည် ဝန်ဆောင်မှု ပေးရာတွင် CDMA ကွန်ရက်ကို အသုံးပြုကြသောကြောင့် CDMA နည်းပညာ သည် ဆက်လက်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လျက်ရှိပြီး CDMA နည်းပညာ နယ်ပယ်တစ်ခုလုံး၏ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုကို ထိန်းထားပေးလျက် ရှိသည်။ CDMA ဖုန်းသုံးစွဲသူများလည်း ဆက်လက် တိုးပွားလာနေပြီး CDMA ဟန်းဆက်များလည်း အရည်အသွေး ပိုမိုကောင်းမွန်လာရာ CDMA နည်းပညာကို သုံးစွဲခြင်းဖြင့် ၎င်းနည်းပညာသည် ရင့်ကျက် တည်ငြိမ်မှုရှိခြင်း၊ တည်ဆောက် ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် လွယ်ကူခြင်း၊ အဆင့်မြင့်သော အသံဝန်ဆောင်မှုနှင့် အချက်အလက် ဝန်ဆောင်မှုများကို အလျင်အမြန် ပေးနိုင်ခြင်းဖြင့် အော်ပရေတာများကို ကူညီပေးခြင်း၊ ဖုန်း သုံးစွဲသူများကို လျင်မြန်စွာ ဆွဲဆောင်နိုင်ခြင်းနှင့် ဈေးကွက်ဝေစုများ ပိုမိုရရှိလာနိုင် ခြင်းစသော အကျိုးကျေးဇူးပေါင်း မြောက်မြားစွာကို ရရှိစေနိုင်သည်။